समाचार - टुलि .्ग लाइफ बढाउने छ वटा तरीका
टुलिंग जीवन बढाउने छ वटा तरिकाहरू
टूलि life्ग लाइफ एक महत्वपूर्ण ईन्जेक्शन मोल्ड निर्माताको नाफा प्रभावित गर्ने कारक भएको छ। यदि व्यावहारिक विधिहरू डिजाइन आवश्यकताहरू भन्दा पर मोल्ड लाइफ बनाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ, तब कम्पनीको नाफा धेरै सुधार हुनेछ। यहाँ मोल्ड लाइफ सुधार गर्ने केहि तरिकाहरू छन्।
१ सही ढ the्गले मोल्ड लक गर्ने बल सेट गर्दै
प्रत्येक मोल्डको लागि सही ताल्चा लगाउने बल सेट गर्न यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यदि एक अपरेटरले एकदम थोरै लकिंग बल प्रयोग गर्दछ भने, इंजेक्शन प्रेशरले मोल्ड लकिंग बल भन्दा बढी र इंजेक्शन प्रक्रियाको बखत मोल्ड खोल्न सक्छ। यदि एक अपरेटरले अत्यधिक लकिंग बल प्रयोग गर्दछ भने, इंजेक्शन मोल्डिंग मेसिनले अधिक लाइन कम्प्रेसन लागू गर्दछ रेखा, भेन्ट क्षेत्रहरू र मोल्ड कम्पोनेन्टहरूमा, यसैले उपकरणलाई क्षति पुर्‍याउँछ।
यी अवस्थाबाट बच्न,
२. कम प्रेसरको नजिक सेट गर्दै।
मोल्डलाई बचाउन प्रेसमा कम-दबावको नजिक सेट अप गर्दै। उच्च-प्रेशर लक स्थिति वास्तविक मोल्ड सम्पर्क स्थिति भन्दा ०.०5 माथि सेट गर्नुहोस्। बिस्तारै कम प्रेशर क्लोजिंग प्रेस कम गर्नुहोस् जबसम्म मोल्ड लक गरिएको छैन। यस समयमा, दबाव बिस्तारै बढ्दछ, मोल्डको लागि पर्याप्त दबावलाई कम दबावबाट उच्च-प्रेशर लक अपमा संक्रमण गर्न अनुमति दिदै।
अधिक के हो भने, मोल्डलाई वास्तविक मोल्ड बन्द गर्ने समय आवश्यकता भन्दा ०. 0.5 सेकेन्ड सम्म निकट समय सेट गर्नुहोस्। उदाहरणको लागि, यदि वास्तविक मोल्ड क्लोजिंग समय ०.8585 सेकेन्ड हो भने मोल्ड क्लोजर टाइमर १.3535 सेकेन्डमा सेट गर्नुहोस्।
Cor. सही ढ the्गले मोल्ड खोल्ने र बन्द गर्ने सेट गर्दै
क्ल्याम्प गतिले चक्र समयलाई असर गर्दछ, तर छिटो गति राम्रो हुँदैन, किनकि त्यसले उपकरण लगाउने वा बिगार्न सक्ने गर्दछ। यो पनी र कम्पोनेन्टहरू मिल्नु भन्दा पहिले द्रुतको नजिकबाट ढिलोमा ढिलो संक्रमण सहज छ र पनी र कम्पोनेन्टहरू मिल्नु भन्दा पहिले ढिलो स्थिति देखा पर्दछ भनेर सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। निश्चित गर्नुहोस् कि मोल्ड ब्रेकवे र मोल्ड खुला छिटो बीचको संक्रमण पनि मिल्दोजुल्दो छ, खुला फास्ट खण्डहरू सबै घट्नाहरू मोल्ड बाहिर आए पछि देखा पर्दछ।
Rect. ईजेक्शन सहि ढrect्गले सेट अप गर्दै
गलत सेटिंग पोइन्ट्सले अत्यधिक स्ट्रोक वा अनुचित भाग इजेक्शनको कारण उपकरण जीवन छोट्याउन सक्छ, परिणामस्वरूप मोल्ड आधाको बीचमा भाग बन्द हुन्छ। वास्तविक उत्पादनलाई आवश्यक छुट्याउने रकमको हिसाबले मोल्डबाट भागहरू सही रूपमा निकाल्न आवश्यक छ। धेरै अधिक इजेजेसनको ईजेक्टर पिनहरूमा धेरै दबाव हुनेछ। इंजेक्शनको मात्राको साथसाथै, इन्जेक्शन प्रेशर धेरै ठूलो सेट गर्नु हुँदैन, सुनिश्चित गर्नुहोस् प्रेशर सेट पोइन्टले मात्र आवश्यक मात्रा प्रयोग गर्दछ।
Cor. सही ढ mold्गले मोल्ड पानी सेटिंग
मोल्ड तापमान धेरै उच्च छ र मोल्ड जीवनमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ, त्यसैले मोल्ड तापमान सीमा स्वीकार्य भाग सौंदर्यशास्त्रको लागि न्यूनतम आवश्यकताको लागि। साथै, यो निश्चित गर्नुहोस् कि गतिशील उपकरण पक्ष र निश्चित उपकरण पक्ष बीचको तापक्रम भिन्नता ° डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा बढि छैन। यो दायरा माथि माथि ले मोल्ड को दुई पक्षहरु बीच थर्मल विकृति को फरक गर्न को लागी, परिणामस्वरूप मोल्ड खोल्ने र बन्द को समस्या सहज छैन, र मोल्ड को पहिरन वा बिग्रेको छ।
Old. ढुसी सफा र मर्मत
उत्पादन वातावरणमा, सँधै जाँच्नुहोस्, सफा गर्नुहोस् र मोल्डहरू मोल्ड गर्नुहोस् प्रति शिफ्टमा न्यूनतम एक पटक। प्रक्रियाको बखत, लगाउने संकेतहरूको लागि हेर्नुहोस्, जस्तै स्क्र्याच, पार्टि part लाइन पोशाक, बुर र मेटल चिप्स।
नियमित रोकथाम मर्मत योजनाको विकास गर्नुहोस्, मोल्ड मर्मतको रेकर्ड राख्नुहोस् र पुनरावृत्ति मर्मत आवृत्ति स्थापना गर्न दोहोर्याइएको मर्मत घटनाहरूको समीक्षा गर्नुहोस्, जसले अनियोजित रखरखाव घटनाहरूलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ। स्लाइड स्लटहरू ग्रीस गरिएको छ कि छैन र स्लाइडहरू सामान्य रूपमा काम गरिरहेको छ कि छैन जाँच्नुहोस्। डिटेन्ट विफलता र लूज गिब्सका संकेतहरूमा ध्यान दिनुहोस्।
सुनिश्चित गर्नुहोस् कि स्लाइड सही स्थितिमा छ जब तपाईं प्रत्येक सफाई र निरीक्षण पछि मोल्डबाट बाहिर निस्कनुहुन्छ। जब मोल्ड hours घण्टा भन्दा बढीको लागि प्रयोग गर्न सकिँदैन, कृपया रस्ट निवारक प्रयोग गर्नुहोस्, र राम्ररी ढु the्गा र पोलि pol क्षेत्र कभर गर्नुहोस् रस्टलाई रोक्नको लागि।
वाईएफ मोल्ड १ 1996 1996 since देखि ईन्जेक्शन मोल्ड डिजाइन र निर्माणको साथ ग्राहकको अपेक्षाहरू भन्दा बढी छ। हामी एक आईएसओ रेजिस्टर्ड मोल्ड निर्माण कम्पनी हौं जुन विभिन्न उद्योगहरूमा कस्टम, प्रेसिजन इन्जेक्शन मोल्ड निर्माणको विशाल अनुभवको साथ छ। अब हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् एक नि: शुल्क डिजाइन परामर्श र जानकार डिजाईन इञ्जिनियरसँग कुरा गर्नका लागि।
पोष्ट समय: जनवरी १ 18-२२१21
धातु सम्मिलितको साथ इंजेक्शन मोल्डिंग, कस्टम मोल्ड, प्लास्टिक घुसाउनुहोस्, मोल्ड कारखाना, मोल्ड निर्माताहरू, प्रोटोटाइप मोल्ड निर्माताहरू,